နေ့စဉ်အမျိုးသမီးများ၏ရင်သားကိုဆယ်မိနစ်ခန့်ကြည့်ခြင်းသည် အမျိုးသားများ၏သက်တမ်းကို၅နှစ်ပိုရှည်စေနိုင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » နေ့စဉ်အမျိုးသမီးများ၏ရင်သားကိုဆယ်မိနစ်ခန့်ကြည့်ခြင်းသည် အမျိုးသားများ၏သက်တမ်းကို၅နှစ်ပိုရှည်စေနိုင်
Posted by cobra on Feb 5, 2011 in Aha! Jokes, Satire | 21 comments
ဂျာမန်သုတေသီများ၏ New England Journal of Medicine တွင်တင်ပြချက်အရ အမျိုးသမီးများ၏ ရင်သားများကိုအမျိုးသားများနေ့စဉ်စိုက်ကြည့်ပေးပါက အသက်ရှည်စေကြောင်းသိရသည်။ ၁၀ မိနစ်စိုက်ကြည့်ပါက အားကစားရုံတွင် မိနစ်၃၀ ခန့်အားကစားလုပ်ခြင်းနှင့်ညီကြောင်း ဒေါက်တာ Karen Weatherby ကပြောကြားခဲ့သည်။ဤသို့ပေါက်ပေါက်ရှာရှာ စူးစမ်းမှုကို အသင်းဖွဲ့၍ ဒေါက်တာKaren Weatherby ကဦးဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။သူတို့ အဖွဲ့သည် ဂျာမနီနိုင်ငံ ဖရန့်ဖတ်မြို့ ရှိ အမျိုးသား၂၀၀ နှင့်သုတေသနပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။၄င်းတို့အထဲမှ တစ်ဝက်ကို နေ့စဉ်ကြည့်ခိုင်းပြီး တစ်ဝက်ကိုသေချာရှောင်ကြဉ်ခိုင်းထားပြီးလေ့လာခဲ့ကြသည်။ငါးနှစ်ကြာသောအခါ နေ့စဉ်သေချာစိုက်ကြည့်ခဲ့သော အမျိုးသားများသည် မကြည့်သူများထက် သိသာခြားနားစွာ သွေးဖိအားအတက်အကျရောဂါကင်းဝေးခြင်း၊သွေးခုန်နှုန်းမှန်ကန်ခြင်းနှင့် လေဖြတ်ခြင်း၊နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါအန္တရာယ်များ နည်းပါးသွားကြောင်းအတည်ပြုနိုင်ခဲ့သည်။
“ဒီလိုလိင်နဲ့ဆိုင်တဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားမှုဟာ နှလုံးကို သွေးညှစ်ပေးမှုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေပြီး သွေးလှည့်ပတ်မှုကိုပါကောင်းစေတာ သံသယရှိစရာမရှိပါဘူး၊သေချာပါတယ် နောက်တစ်ချက်က ကြည့်တာချင်းတူတာတောင် ပိုကြီးတဲ့ရင်သားကို ကြည့်သူတွေကပိုအကျိုးထူးတာတွေ့ရပါတယ်။အသက်၄၀ကျော်တဲ့အမျိုးသားတွေဆိုရင်တော့ D-cup size နဲ့ သူ့အထက်တွေကိုကြည့်သင့်ပါတယ် “လို့ဒေါက်တာကပြောသွားပါတယ်။(သူပြောတဲ့ D-cup ဆိုက်က မြန်မာလို ၃၆ ခန့်ရှီတယ်လို့အတွေ့ကြုံမသေးသူ အယ်ဒီတာကိုကိုတစ်ယောက်က ပြောသွားကြောင်းပါ)
မိတ်ဆွေတစ်ယောက် ပေးပို့သော mail မှ ကူးယူပါသည်။
သြော် ဟုတ်လား ကောင်းလိုက်တာ ပြူးပြဲကြည့်ရတော့မှာပေါ့နော် မိန်းကလေးတွေရေ ခွင့်လွတ်ဦးဟ…
( ယောင်္ကျား)………… ဟ.!..ကျန်းမာရေးလေကွာ…
( ယောင်္ကျား)………….၁၀ မိနစ် လေးဘဲ ဟာကို….
Mr.cobra .. အဆင်ချောဘို့ မလွယ်ဘူးနဲ့တူတယ်….
ကို zippo ရာ…။
ဟွန်း မကြည်ချင်ပါဘူး အားနာစရာကြီး
မိန်းကလေးများ၏ ရင်သားကို ယောက်ျားလေးများမှ နေရာမရွေးအချိန်ခါမရွေး ကြည့်ရှုပါက ကျန်းမာရေးရှုဒေါင့်အရသာကြည့်ရှုကြောင်း ထင်ရှားသဖြင့် အဆိုပါဖြစ်စဉ်နှင့်ပါတ်သက်သောအမှုများအား ပြစ်မှုမှကင်းလွတ်ကြောင်း (မှတ်ချက်၊ ကြည့်ရုံသာကြည့်ရမည်၊ ကိုင်တွယ်ခြင်းမပြုရ။)
နောက်ပြီး ရင်သားကြီးသောအမျိုးသမီးများစုဝေးပြီး အမျိုးသားများအတွက် သီးသန့်ဆေးခန်းတစ်ခုဖွင့်လှစ်သင့်ပါသည်….
အောက်ကသုံးသပ်ချက်အရကတော့ .. ဒီသတင်းနဲ့ရီဆပ်ခ်ျက မဟုတ်ပါဘူးတဲ့..
ကြည့်ရတာ.. ငယ်ငယ်က ချိုချိုစို့တာ သတိရတဲ့တယောက်ယောက်က ပေါက်တပ်ကရ ရေးလွှတ်လိုက်တာပဲဖြစ်ရမယ်..။
မြန်မာအမျိုးသမီးတွေ ဒီကပ်ပ်ဆိုက်ရှိနေဖို့က ..ကလေးအမေတွေပဲဖြစ်မှာ..
‘Medical study’ purportedly published in the New England Journal of Medicine claims research has shown that ogling women’s breasts increases men’s lifespans.
Description: Email hoax / Satire
Circulating since: March / April 2000
This is notajoke. It came from the New England Journal of Medicine. Great news for girl watchers: Ogling over women’s breasts is good foraman’s health and can add years to his life, medical experts have discovered. According to the New England Journal of Medicine, “Just 10 minutes of staring at the charms ofawell-endowed female is roughly equivalent toa30-minute aerobics work-out” declared gerontologist Dr. Karen Weatherby.
Analysis: Don’t get your hopes up, guys. No such study was ever published in the New England Journal of Medicine (check for yourself).
A search of the thousands of peer-reviewed articles contained in the National Institutes of Health PubMed database turns up zero items documenting the health benefits of staring at women’s breasts, and, for that matter, zero items authored by “Dr. Karen Weatherby” (who does not exist, so far as I can tell).
If the story smacks of tabloid faux-journalism, well, that’s precisely what it is. The text hit the Internet in March or April 2000, mere weeks afterastrikingly similar article appeared in the consistently misinformative Weekly World News (nor is this the first time we’ve encountered baseless Internet rumors traceable to precisely that source). A slightly different version had already appeared in the May 13, 1997 issue of the tabloid.
It goes without saying (I hope) that it’s unwise to take medical advice from supermarket tabloids, still less from forwarded emails. Males who wish to increase their lifespans ought to consider practicing common sense as an alternative — it’s more likely to achieve the desired result than any amount of public breast ogling.
Admittedly, I don’t have any medical research to back that up. Volunteers?
ကိုခိုင် ကယ်မှပဲ အမျိုးသမီးတွေ စိတ်ချမ်းသာယာ ရတော့တယ် ..
တော်သေးတာပေါ့ မဟုတ်ရင် အသက်ရှည်ဆေးဆိုပြီး ဆိုင်ခန်းဖွင့်ရောင်းနေဦးမယ်
ဆေးခန်သွားမဲ့ စိတ်ကူးလေးတောင် ဘယ်ရောက်သွားလဲ မသိပါဘူး…
၁၀ မိနစ် = ၅ နှစ်
၃၀ =၁၅ နှစ် ဆိုတော့..
နာရီဝက် ကြည့်မလို့…..ခုတော့ ဗျာ…” တောက်” (အားမလို အားမရ တက်ခေါက်သံ)
ဓါတ်ပုံ/ ဗွီဒီယိုထဲရော ကြည့်လို့မရဘူးလား
အပြင်မှာကျတော့ ဟီးဟီး ချက်ချာဂျီးဂျ
အ၀တ်နဲ့ ကြည့်ရမှာလား အ၀တ်မဲ့ ကြည့်ရမှာလား သေချာပြောဦးလေ အ၀တ်မဲ့ဆိုရင်တော့ အင်းးးးးးး အဆင်မပြေနိုင်ဘူး။
ဇာတ်ကားထဲမှာ ကြည့်ရတာ အမှုမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်
MG ရွာသားတွေ ကို အမြင်ကပ် လို့ မှုခင်း ကျူးလွန် ခိုင်း နေတာ များလား။
ဒါမျိုးကြရင် တက်ညီလက်ညီ ၀င်မန်းနေကြတယ်ဗျို့ ။.